လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ ကို နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ ဆာဒီယို မာနေး ရဲ့ အင်တာဗျူး - xyznews.co
လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ ကို နှုတ်ဆက်သွားတဲ့ ဆာဒီယို မာနေး ရဲ့ အင်တာဗျူး
မေး – ဆာဒီယို ….အခုလို ခင်ဗျားအိမ်ကနေ ကြိုဆိုပြီး နှုတ်ဆက် အင်တာဗျူးခွင့် ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် နဲ့ကြားက အပြောင်းအရွှေ့ ကိစ္စတွေ အားလုံးလဲ ပြီးစီးသွားပါပြီ။ ကိုယ့် ကိုယ်ကို လီဗာပူး ကစားသမား တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ ခံစားချက်က ထူးဆန်းနေမလား။
ဖြေ – သေချာတာပေါ့ဗျာ။ အန်ဖီးလ်မှာ ၆ နှစ်တာ ကာလ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် လီဗာပူး ကစားသမား တစ်ယောက် မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ ခံစားချက်က တော်တော်ကို ထူးဆန်းတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော့် က ဒီမှာ အကောင်းဆုံး အချိန်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး ရောက်လာခဲ့တဲ့ နေ့က စလို့ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာရော ၊ ကွင်းထဲမှာ ကစားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ၊ အထူးသဖြင့် အန်ဖီးလ် ကွင်းထဲက လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ ရှေ့မှာ ကစားခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေပေါ့။ အခုတော့ နိဂုံးချုပ်သွားပါပြီ ၊ ဘာတွေ ထပ်ပြီး ပြောလို့ ရတော့မှာလဲ။
မေး – ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီ ကုန်ခါနီးတုန်းက ခင်ဗျား နဲ့ ပတ်သက်လို့ အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေ က ဆက်တိုက် ထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်နော်။ စိန်ခေါ်မှုသစ်တွေ ရင်ဆိုင်ဖို့ အတွက် အချိန်ကျပြီ ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်မျိုး ဘယ်လို ရခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြနိုင်မလား။
ဖြေ – အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းတွေက အများကြီး ကို ထွက်ခဲ့တာပါ ဒါပေမယ့် ကျနော် က ခေါင်းထဲမှာ ဝေဝါးနေတတ်တဲ့ လူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်က ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိသလို ၊ ဘယ်လို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ပြရမလဲ ဆိုတာ နားလည်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် ဖြင့် အဲဒီ ကိစ္စတွေကို နည်းနည်းလေးမှတောင် မတွေးခဲ့ပါဘူး ဘာလိုလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်က လီဗာပူး ကစားသမား အဖြစ် ရှိနေတုန်းပဲလေ ၊ ပြီးတော့ အရေးပါတဲ့ ပွဲစဉ်တွေ ဆက်ပြီး ကစားဖို့ ကျန်နေသေးတာကို။
အဲဒီ အချိန်တွေက ကျနော့်အတွက်ရော ၊ အသင်းအတွက် ၊ ပရိသတ်တွေ အတွက် အရမ်းကို အရေးကြီးတဲ့ ကာလ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ရင်ဆိုင် ကစားရမယ့် ပွဲစဉ်တွေကို အာရုံစိုက်နေခဲ့တာပါ။ အပြောင်းအရွှေ့ ကောလဟာလတွေ အပေါ် ဘာမှတ်ချက်မှတောင် မပေးချင်ခဲ့ပါဘူး ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကြီး ကို ဆွတ်ခူးနိုင်မယ် ဆိုရင် အသင်းအတွက် ၊ ပရိသတ်တွေ အများကြီးကို ခမ်းနားခဲ့မှာလေ။
ဒါကြောင့်မို့ အဲဒီ သတင်းတွေ အပေါ် စကားတစ်ခွန်းမှတောင် မ ဟ ခဲ့ပါဘူး ၊ ဒါတွေက ဘောလုံး လောကမှာ ဖြစ်နေကျ အကြောင်းအရင်းတွေပဲလေ။
မေး – လီဗာပူးနဲ့ အတူ အောင်မြင်မှုတွေ အားလုံးကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ခံစားမိလား။
ဖြေ – သေချာတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော် ပြောခဲ့သလိုပဲ ဆောက်သမ်တန်မှာ ရှိနေစဉ် အချိန်က ကလော့ပ် နဲ့ စကားပြောကြတော့ လီဗာပူး ဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကစားခွင့် မရသေးပါဘူး။
အဲဒီမှာ သူက ရှေ့ဆက်မယ့် စီမံကိန်းတွေ ရှင်းပြလာချိန်မှာ ၊ ကျနော့် နှလုံးသားထဲကနေ လီဗာပူး ကို ပြောင်းကစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီကလပ်မှာ ကျနော် ကစားပေးနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို မြင်ယောင်မိတဲ့ အပြင် ၊ နေရာမှန် တစ်ခုကို ချိန်သားကိုက် ရောက်လာခဲ့သလိုပါပဲ။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ဟာ အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီးကို ရယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဒီကလပ်နဲ့ အတူ အကောင်းဆုံး ကာလတွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
ကျနော် အတွက် “ဘ၀ ဆိုတာ စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုပါပဲ” ။ ဘိုင်ယန် က ကမ်းလှမ်းလာတော့ အသင်းပြောင်းချင်တဲ့ အကြောင်း လီဗာပူး ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းချင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းက နေရာသစ်မှာ စိန်ခေါ်မှုသစ်တွေ ရင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ တခြား အကြောင်းအရာတွေ လုံး၀ မရှိပါဘူး။ စိန်ခေါ်မှုသစ်တွေ ရင်ဆိုင်ရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုကောင်းသထက် ကောင်းအောင် ကြိုးစားချင်တာလေ။
မေး – အခုနက ကလော့ပ် အကြောင်း ပြောသွားတယ်နော်။ သူ အပါအဝင် ၊ အသင်းက ကစားဖော်တွေကိုရော နှုတ်ဆက်ပြီးပြီလား။
ဖြေ – ကလပ် အသင်းနှစ်ခု အကြား သဘောတူညီမှု ရတဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ကျနော် ကိုယ်တိုင် မက်ဆေ့ အရှည်ကြီး ရေးပြီး တစ်ယောက်ချင်းစီ ပို့ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကလဲ ဝမ်းနည်းနေတာပါ။ ကျနော်လဲ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေပဲလေ ၊ လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားရတာပေါ့။
မေး – လီဗာပူး ကို အပြုံးတွေ နဲ့ နှုတ်ဆက်ပြဖို့က တော်တော်လေး အရေးကြီးခဲ့သလား။
ဖြေ – ကြီးတာပေါ့ဗျာ……….ဒီ အစီအစဉ်က အန်ဖီးကို စပြီး ရောက်လာခဲ့ ကတည်းကပါ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကျနော် က ကိုယ်ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို အပြုံးတွေနဲ့ပဲ နှုတ်ဆက်ချင်တာပါ။ ဒီကလပ် က တော်တော်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ နေရာ တစ်ခုပါ။ အဝတ်လဲခန်း အတွင်းမှာလဲ ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိကြပါတယ်။ ကျနော် ကတော့ နည်းပြ အဖွဲ့ဝင်တွေက အစ ၊ မီးဖိုချောင် ဝန်ထမ်းတွေ ၊ ကန်တင်းက အန်တီကြီးတွေ အထိကို တရင်းတနှီးရှိခဲ့ပါတယ်။
မေး – လီဗာပူး ကို စတင် ရောက်ရှိလာချိန်က စလို့ ကစားသမား တစ်ယောက် အနေနဲ့ရော ၊ လူ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက် အနေနဲ့ပါ ရင့်ကျက်မှုတွေ ရှိလာခဲ့ပြီလား။
ဖြေ – WoW…. မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကို ပြောင်းလဲခဲ့ ပါတယ်။ ကျနော် ဒီကို စပြီး ရောက်လာချိန်က အသက် 24 နှစ်ပဲ ရှိဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ အခုလောက်ထိ အသက်မကြီးသေးဘူးပေါ့ ၊ ဒါပေမယ့် ကစားသမား တစ်ယောက် အနေနဲ့ရော ၊ လူသား တစ်ယောက် အနေနဲ့ပါ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေက အများကြီးပါပဲ။ ခြေစွမ်းပိုင်း ပြောရရင် အသင်းမှာ ရှိတဲ့ ထိပ်တန်း ကစားဖော်တွေဆီကနေ သင်ယူခဲ့ရတာတွေ များပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေကလဲ ဒီနေ့ ဒီလို အချိန်က မာနေးမျိုး ဖြစ်လာအောင် ကူညီပေးခဲ့ကြတာပါ။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လဲ အလုပ်တွေကို အရမ်း အရမ်း ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ်။
မေး – လီဗာပူး ကစားသမားဘ၀ ကာလ အတွင်းမှာ ၊ ကလပ် နဲ့ အတူ ဆုဖလားတွေ အားလုံး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ် ၊ ဒီနှစ် အာဖရိက ဖလားကြီးကိုလဲ သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အာဖရိက အကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆု အပြင် ၊ ရွှေဖိနပ်ဆုတွေကိုပါ သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 2016 ခုနှစ် ရောက်လာချိန်တုန်းက အဲဒီလို အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ရမယ်လို့ အိပ်မက် မက်ထားခဲ့လား။
ဖြေ – ပြောရရင် ကျနော် ငယ်ငယ်လေး ကတည်းက အဲဒီလို အောင်မြင်မှုတွေ ရယူဖို့ အိပ်မက် မက်ထားခဲ့တာပါ။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အားလုံးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ဖို့ပေါ့။ အဲဒီထဲမှာ အသင်းလိုက် အောင်မြင်မှုတွေ အပြင် ၊ တစ်ဦးချင် ထူးခွျှန်ဆုတွေလဲ ပါ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကြိုးစားမှုတွေကို ဘယ်တုန်းက မှ မရပ်တန့်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော် တကယ်ကို အလုပ် ကြိုးစားတဲ့သူပါ။
ဆောက်သမ်တန်မှာ ရှိနေတုန်းက လီဗာပူး ကို ပြောင်းရွှေ့လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချတာဟာ အချိန်မှန် ၊ နေရာမှန် ဆိုတာ သဘောပေါက်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အောင်မြင်မှုတွေ ရလိုက်တော့ ၊ ငါ ဖြစ်ချင်တာတွေတော့ ဖြစ်ခွင့်ရပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောမိတာပေါ့။ အဲဒီ အတွက် ဒီကလပ်အပေါ်ကိုလဲ အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။ ဘယ်တော့မှ မေ့ပစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးရင် နောက်ထပ် စိန်ခေါ်မှုသစ်တွေ ရင်ဆိုင်ဖို့လဲ ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။
မေး – ဒီတစ်ခါတော့ မေးခွန်း ခပ်ခက်ခက်လေး မေးချင်ပါတယ်။ လီဗာပူး ဘောလုံးသမား ဘ၀ တစ်လျှောက် အနှစ်သက်ဆုံး အခိုက်တန့် က ဘာဖြစ်မလဲ။
ဖြေ – ကျနော့် အတွက်တော့ ဒါက သိပ်ပြီး ခက်တဲ့ မေးခွန်း မဟုတ်လောက်ပါဘူူး။ ပြောရရင် 2019 ခုနှစ် အိမ်ကွင်းမှာ ဘာစီလိုနာ ကို ပြန်ပြီး အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ပါ။
အဲဒီ နှစ်က ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားကြီးလဲ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ်လေ။ အဲဒီ ပွဲဟာ ကျနော့် အတွက် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်မျိုးပါပဲ။ နှလုံးသားထဲမှာလဲ ထာဝရ သိမ်းထားမှာပါ။
မေး – ခင်ဗျား အသင်းပြောင်းလိုက်ချိန်မှာ စုစုပေါင်း သွင်းဂိုး 120 နဲ့ ကလပ် သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် 14 ယောက်မြောက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ဘောလုံးသမား အဖြစ် မှတ်တမ်း ရေးထိုးသွားတဲ့ အပြင် ၊ လက်ရှိ အချိန်ထိ လီဗာပူး က ပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ ထိပ်တန်း ဂန္တဝင် ကစားသမားကြီးတွေထဲက တစ်ယောက် အဖြစ်လဲ သတ်မှတ်ထားကြပါပြီ။
အဲဒီ သွင်းဂိုးတွေထဲက အကြိုက်ဆုံး ဂိုးက ဘယ်ဂိုး ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ – WOW….. အီမရိတ် ကွင်းကြီးထဲမှာ ပထမဆုံး ပါဝင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာပဲ သွင်းယူခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ဂိုးကို သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် ဘက်ကို သွင်းခဲ့တဲ့ ဂိုးပါ။
နူအာ ကြီး စောင့်တဲ့ ဂိုးပေါက်ကို သွင်းတဲ့ ဂိုးပေါ့ (ရယ်လျှက်) ….ဆောရီး နူအာ…
ဒုတိယ ဂိုးကလဲ မယုံကြည်နိုင်စရာ ကောင်းလွန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ2ဂိုးကို ရွေးချင်ပါတယ်။
မေး – အင်တာဗျူး ဖြေခဲ့တဲ့ တစ်လျှောက်လုံးမှာ လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ အကြောင်း ခဏခဏ ထည့်ပြောတယ်နော် ၊ အန်ဖီးလ်က ပရိသတ်တွေကလဲ ခင်ဗျား ကို ချစ်ကြပါတယ်။ ခင်ဗျား အကြောင်းတောင် သီးချင်း စပ်ဆိုပြီး အားပေးခဲ့ကြတာပါ။ ဒါကို ကြည့်ရင် မာနေး ကို ဘယ်လောက် တန်ဖိုးထားလဲ ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါပြီ။ အဲဒီ ပရိသတ်တွေကိုရော ဘယ်လောက် အထိ သတိရနေမလဲ။
ဖြေ – ူး ကနေ ဘယ်လို ကစားသမားမျိုးပဲ ထွက်ခွာသွားပါစေ ၊ ပရိတ်တွေကိုတော့ အမြဲတမ်း အမှတ်ရနေကြမှာပါ ဘာလိုလဲ ဆိုတော့ သူတိုက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ပရိသတ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ပါ။
ကျနော် ကတော့ သူတိုကို လွမ်းနေမှာ သေချာပါတယ်။
အခုထိ လီဗာပူးမှာ ရှိတဲ့ ကျနော့် ရဲ့ အိမ်ကို မရောင်းဘူးလေ။ ဒါကြောင့်မို သေချာပေါက် ပြန်လာခဲ့ဦးမှာပါ။ တစ်နေ့နေ့ ရောက်ရင် လီဗာပူး ပရိသတ်တွေ နှုတ်ဆက်ရင်း လီဗာပူး ကစားတဲ့ ပွဲကို လာကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။ ဘာလိုလဲ ဆိုရင် ကျနော် က သူတိုပြီးရင် ၊ လီဗာပူး ကို အမှန်ကန် အားပေးမယ့် နံပါတ် 1 ဖန် ဖြစ်နေလိုပါပဲ”
Previous Article ဈေးချထားတဲ့ ယူနိုက်တက် Dou ၊ ရာဖင်ညာ ရဲ့ မပြီးသေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း ၊ လူကာကူ ကို မကြိုဆိုတဲ့ အင်တာ အယ်ထရာ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
Next Article ရွှီးဖြန်းတဲ့ ဘာဆာ ? ၊ ယူနိုက်တက် ကို မရွေးတဲ့ လူငယ်လေး ၊ တပည့်ဟောင်းကို ထပ်ချိတ်ပြန်တဲ့ မော်ရင်ဟို ၊ မထူးသေးတဲ့ ဂျေဇု အခြေအနေတို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ